उम्मेद्वार - अमर रेग्मी
अमर रेग्मी नेपाली कांग्रेस सिराहा ३
नेपाली कांग्रेसका नेता अमर रेग्मी २०१० सालको भदौ २० गते सिरहाको नरहा गाउँपालिका –२, पानबारीमा जन्मनु भएको हो । रेग्मीका वुवा माधव प्रसाद रेग्मी २००४ सालदेखि कांग्रेसको सिपाही हुनुहुन्थ्यो । अमरले भने १६ वर्षको उमेरमा २०२६ सालमा वनारसमा वी.पी. कोइरालको हातबाट नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिनु भएको थियो । सोही कारण ९ वर्ष देश निकाला भएका रेग्मीको परिवार ९ वर्षपछि २०२५ सालमा नेपाल आएका थिए । बुवाको निधनपछि ०४२ सालदेखि आमा बुना रेग्मीले पार्टीको जिल्ला सभापति भएर पार्टी चलाउनु भएको थियो । अमर भने २०५३ सालमा जिल्ला सचिव, त्यसपछि उपसभापति हुँदै कार्यवाहक सभापतिसमेत हुनुभयो । २०५७ सालबाट निरन्तर महासमिति सदस्य जित्दै आउनु भएको छ । २०६४ सालमा सिरहाको क्षेत्र नं. ४ मा उम्मेदवार बनेका रेग्मी पराजित हुनु भएको थियो ।
उदयपुर २ (ख) पूरा विवरण